Mersin मा मेट्रो कहिले? कहाँ मर्सेन मेट्रो लाइनहरु पास हुनेछ? - RayHaber
घरटर्कीटर्की भूमध्य तट33 मार्सिनMersin मा मेट्रो कहिले? कहाँ मर्सेन मेट्रो लाइनहरु पास हुनेछ?
04 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 33 मार्सिन, टर्की भूमध्य तट, रेल, साधारण, नक्सा, KENTİÇİ रेल प्रणाली, HEADLINE, मेट्रो, टर्की, भिडियो 0
मेट्रो कहिले आयोजित हुनेछ
मेट्रो टर्की गरेको परिवहन इस्तानबुल, अंकारा, Izmir अहिले Mersin मा भनिरहेका छन् मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मध्ये एक छ। मर्सनमा मेट्रोको काम कहिले सुरु हुन्छ? संसदीय योजना तथा बजेट आयोगका अध्यक्ष तथा एके पार्टी मर्सिनका डेप्युटी लाट्फी एल्वानले भने, “मर्सन मेट्रोलाई लगानी कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। म हाम्रो राष्ट्रपतिलाई मर्सिनको मूल्यको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु मर्सिन सबवे कहाँ बन्ने छ? कहाँ मर्सन मेट्रो लाइनहरु पार हुनेछ? Mersin मेट्रो कहिले समाप्त हुनेछ?
लाट्फि इल्वानले भने कि उनका कामहरू मर्सिनलाई फाइदा हुने हरेक विषयहरूमा जारी रहनेछन् र भने: “मर्सन हाम्रो सबै कुरा हो। जबसम्म Mersin जीत। जब हामीसंग माग आयो, हामीले कहिले पनि मर्सन सबवेलाई लगानी कार्यक्रममा समावेश गर्ने बारे सोचेनौं जुन मर्सनका जनताको यातायात परीक्षाको लागि महत्वपूर्ण समाधान हुनेछ। हामीले आवश्यक पहल गरेका छौं। अन्तमा हामीले हाम्रो राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोयनको स्वीकृति प्राप्त गर्‍यौं। ऊ मर्सिन र मार्सिनका मानिसहरूलाई माया गर्छ। टर्की गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले हामीलाई मर्सिन मेट्रोलाई लगानी कार्यक्रममा समावेश गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग दिएका छन्। Mersin मेट्रो लगानी कार्यक्रम शामिल। मर्सिनलाई उनको मूल्यको लागि हाम्रो राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। "
कहाँ मर्सन मेट्रो बनाउने?
मर्सिन मेट्रो, जुन पहिलो र धेरै क्षेत्रहरूमा मात्र हुने विशेषताहरू छन्, आधुनिक यातायात क्षेत्रको रूपमा मात्र होइन, शहरी बस्ने ठाउँको रूपमा पनि डिजाइन गरिएको थियो।
देशमा पहिलो हस्ताक्षर गरेर, यसले त्यस्तो प्रणाली सिर्जना गर्नेछ जहाँ जनता शहरको चाहिएको स्थानमा मेट्रो सुविधाका साथ साइकल, मोटरसाइकल र कारहरू बन्द गर्नका साथै मुख्य स्टेशनहरूमा बन्द र सुरक्षित कार पार्कमा स्थानान्तरण गर्न सक्दछन्। परिवहन को एकीकरण सक्षम, यो टर्की मा पहिलो मेट्रो प्रणाली हुनेछ
मर्सन मेट्रोका सुविधाहरू के हुन्?
प्रोजेक्टमा विश्वभरको सबैभन्दा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी 10 मिडिया बाह्य ट्याब्लेट हाम्रो देशमा फेरि सुरक्षित, मेट्रोको निर्माणको लागि अझ बलियो, सहज र छिटो पहुँचमार्फत एकल देश प्रणालीमार्फत सबै भन्दा छिटो बाटोमा पूरा गर्न र मर्सिनका मानिसहरूसँग भेट्न योजना बनाईएको छ।
सबवे स्मार्ट सिटी टेक्नोलोजी, पूर्ण स्वचालित अपरेसन प्रणाली, आरामदायक वागनहरू, विशेष प्रकाश र घोषणा प्रणाली, नवीनतम प्रणाली सूचना बोर्डहरू, चल भिजुअल विज्ञापन प्रणाली, भर्खरको प्रणाली एस्केलेटर र एलिभेटरहरू, 7'den 70'e समग्र जनतालाई अपील गरीनेछ यो लक्ष्य लिएको छ।
मर्सिन मेट्रो कहिले खोल्नेछ?
मेट्रो 1। लाइनले शहरको मुख्य पूर्व-पश्चिम दिशामा सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवा दिनेछ। 10 2, जुन बर्षमा लागू हुने तालिकामा छ। यो लाइन पोजकू र विश्वविद्यालय बीचको प्रकाश रेल वर्गमा 10,5 किलोमिटर लम्बाइ र 8 स्टेशनको बीचमा निर्माण गर्ने योजना छ र सतहबाट हेर्नका लागि। 20232मा जनताको लागि उपलब्ध बनाइएको मानिन्छ। लाइनको लागतलाई आजको मुद्रा मूल्यको साथ 400 मिलियन TL लगानी आवश्यक छ। 12, जो 12 किलोमिटर लम्बाइ र3स्टेशन, जो केन्द्रीय स्टेशन, शहर अस्पताल र भूमिगत भूमिगत बस स्टेशनमा जोडिने योजना छ। लाइन 2024 मा सेवामा राखिएको अपेक्षा गरिएको छ।
मर्सिन मेट्रो लाइनहरू कहाँ जान्छन्?
4.Hat 5,5 किलोमिटर र6स्टेशन केन्द्रीय स्टेशन और राष्ट्रीय उद्यान बीच मिलेर बनेको छ। ट्राम प्रोजेक्ट, जो तटबाट जान्छ, 2025 सम्म जनतालाई उपलब्ध गराउन योजना गरिएको छ। 8, 8 किलोमिटर लम्बाई र5स्टेशन सम्मिलित, बस स्टेशन र Pozcu जडान हुनेछ। रेखा आंशिक रूपले भूमिगत हुनेछ। परियोजना 2027 मा मर्सिनमा ल्याउने लक्ष्य गरिएको छ।
11, 12 किलोमिटर र6स्टेशनहरू, उत्तरबाट पोर्ट र पोोजcu जोडिएको। पूरै लाइन भूमिगत पार हुनेछ। यो लाइन 2029 मा सम्पन्न हुने योजना छ र Mersin को लागि सेवामा राखिएको छ।
मर्सन मेट्रोसु म्याप
विश्व पेडल्याया मार्सिन संग 'टूर अफ मार्सिन' 18 / 01 / 2018 अन्तर्राष्ट्रिय साइकल टुर टूर 'टूर माइर्सिन' को तयारी, जुन यस वर्ष आयोजित गरिनेछ मर्सिन मेट्रोपोलिटन नगरपालिका द्वारा आयोजित गरिनेछ। टूर अफ मार्सिनको पहिलो कार्यकारी समिति बैठक सम्पन्न भयो। मार्सिन महानगरीय नगरपालिका खेलकुद सुविधाहरु मा आयोजित कार्यकारी समिति बैठक आयोजित मर्सिन महानगरीय नगर पालिका हसन गोब्बेल को अध्यक्षतामा आयोजित भएको थियो, जबकि मिर्सन युवा सेवा तथा खेल शाखा शाखा व्यवस्थापक अली ओस्मान बेबेक, प्रांतीय राष्ट्रिय शिक्षा शाखा मञ्च बहादुर अलिमिज, मर्सिन प्राविधिक सुरक्षा निर्देशक खेलकुद सुरक्षा शाखा शाखा उप Remzi Ozer, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अली Adalioglu को टर्की खेल राइटर्स संघ, तिरुत्तानी समाचार निर्देशक हसन गोपनीय, सबै Mersin Headmen ...
'मेरर्सिन टूर अफसोसिस्ट टूर मेर्सिनमा क्याम्प हुनेछ।' 28 / 11 / 2018 'टूर ऑफ मेरर्सिन' को प्रतिष्ठा को धन्यवाद, जो वर्षहरु को लागि मार्सिन महानगरीय नगर पालिका द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ,4को क्यारिंगिंग को लागि विदेश देखि साइकल चलने वाला टीमहरु द्वारा पसंदीदा शहर बन गयो। मर्सिन मेट्रोपिटिटन नगरपालिकाले सुनिश्चित गर्न को लागी कि मर्सिन मेट्रोपोलिटन नगरपालिकाले खेलकुदका फलहरु लाई फलस्वरुप शुरु गरेको छ। माइर्सन टूरको लागि धन्यबाद, जनवरी र अप्रिलमा शहर जान्ने साइकल चलिरहेको टीमहरु मार्सिनको क्याम्पसमा आउनेछ। यस वर्ष, 25-28 अप्रिल 2019 बीच आयोजित गरिनेछ र क्यालेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय साइक्लिङ्ग फेडरेशनको क्यालेन्डरमा हुनेछ।
बार्सो हाई स्पीड रेलवे मार्ग 23 / 02 / 2016 Bursa हाई स्पीड रेल मार्ग मार्ग कहाँ हुनेछ: Will Bursa उच्च स्पीड लाइन Mezitler मार्फत पारित वा आहा माउन्ट पछ्याउने? वास्तव मा लिरी यी पृष्ठहरु को पाठकहरु घटनाहरु लाई विकास को बारे मा जान्छन्। किनकि उनीहरूले डिसेम्बर 2012 मा जनवरी3मा 2016 पढेको छ कि मार्गमा समस्या र त्रुटिहरूको कारण बाटाटमा राखिएको उच्च गति रेल परियोजनालाई नयाँ छोडिएको परियोजनाको शुरुवात भयो। त्यसपछि, ... हामीले बर्सका गवर्नर मुनिर कालोलुlu को व्याख्याहरू समावेश गरेका छौं, जुन हामीले 16 फेब्रुअरी 2016 दिनको प्रत्येक कोणबाट Olay TV को कार्यक्रममा होस्ट गरेका छौं। त्यसोभए यो बिन्दुको वर्णन गर्दै ... dolayısıyla हाम्रो अवस्थित परियोजना यिनसेहिर र बेइलीकिक बीचको ठूलो भू-भागको कारणले रद्दीएको छ। म हालै पुन:
स्ट्रीट, स्ट्रीट, बुलेभार्ड र अन्काराको अन्डरपासहरू
चेक प्रधानमन्त्री बाबिस: 'राजमार्ग र उच्च गति ट्रेनको लागि सहयोग गरौं'
विश्व पेडल्याया मार्सिन संग 'टूर अफ मार्सिन'
'मेरर्सिन टूर अफसोसिस्ट टूर मेर्सिनमा क्याम्प हुनेछ।'
बार्सो हाई स्पीड रेलवे मार्ग
जब अंकुरा र इस्तांबुल बीच निर्माणको लागि उच्च स्पीड रेल परियोजना निर्माण हुनेछ?
उच्च स्पीड ट्रेन कहिले सञ्चालन गर्ने हो?
Manisa हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट कहिले लागू हुनेछ?
नागरिकहरूले बार्सोमा ट्राम स्टेशनहरूको लागि ओभरपासहरू चयन गर्नेछ
Eskişehir को नयाँ ट्राम लाइन्स 25 जनवरी 2014 मा सञ्चालन गर्न